စုံထောက်ရန်မင်းနှင့် မဟာမြိုင်လူသတ်မှု အပိုင်း(၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » စုံထောက်ရန်မင်းနှင့် မဟာမြိုင်လူသတ်မှု အပိုင်း(၂)
စုံထောက်ရန်မင်းနှင့် မဟာမြိုင်လူသတ်မှု အပိုင်း(၂)
Posted by Smiegol on Jul 11, 2011 in Copy/Paste |4comments
မဟာမြိုင်ဆေးခန်းရောက်တော့ စာနယ်ဇင်းမှ လူများလဲ ပြည့်ကျပ်လို့၊ ရဲဝန်ထမ်းများလဲ သူ့ထက်ငါ အလုပ်ရှုပ်
နေကြတာကိုတွေ့ကြရတယ်.. ကျွန်တော်နဲ့ ကိုရန်မင်း ဓာတ်လှေကားမှတဆင့် လာရောက်ခေါ်ယူသူဦးဆောင်
တဲ့အခန်းသို့ရောက်ရှိသွားချိန်မှာတော့ ဆေးရုံးကုတင်ပေါ်မှာ အသက် ၂၅ နှစ်ခန့်ရှိသော အမျိုးသမီးတစ်ဦး
ပုံမှန်သမားရိုးကျ သေဆုံးနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ဘေးနားမှာ စတင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ သူနာပြှုဆရာမလေး
ကို ရဲဝန်ထမ်းများ စစ်ဆေးမေးမြန်းနေပြီး၊ ဆရာမလေးမျက်နှာမှာ ကြောက်လန့်နေတဲ့အသွင်အတိုင်းသားပေါ်
ကျွန်ုပ်။ ။ ကိုရန်မင်းရယ်..ဆေးရုံမှာ လူနာတစ်ယောက်သေသွားတယ်ဆိုတာ
တော်တော်အရေးကြီးတဲ့အမှုတဲ့လားဗျာ။ ရောဂါကြောင့်သေတာဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ မဟုတ်ဘူးလား
ရန်မင်း။ ။ ဟားဟားဟား..ကိုသြဘာရယ် အခုဖြစ်နေတဲ့ပြသနာက သေသူက ဒီမှာဆေးရုံတက်နေတဲ့ သူမဟုတ်သလို ဘယ်သူမှန်းမသိပဲနဲ့ ဒီမှာလာသေနေလို့တက်တဲ့ပြသနာဗျ..
ရဲ ။ ။ ဒီမှာတက်နေတဲ့သူက အသက် (၇၀)လောက်ရှိတဲ့သူအဖွားကြီးတစ်ယောက် သိသလောက် ကြောထောက်နောက်ခံရှိတဲ့ပုံမပေါ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်တော်တော်ချမ်းသာတာဗျ။ ဆေးရုံစရိတ်ကို လိုသလောက်ပေးနိုင်တယ်။ နေ့ညကို သူနာပြုမပြတ်ငှားထားတယ်။ နောက်ပြီး အတော်ရက်ရောတဲ့အဖွားကြီးလို့လဲ သိရတယ်။ ခက်တာက အဖွားကြီးက ကင်ဆာရောဂါနဲ့ နောက် (၆)လလောက်ပဲ အသက်ရှင်နိုင်တယ်လို့ ဆရာဝန်ကပြောထားပြီးသား။ အဖွားကြီး ဆေးရုံတက်နေတာလဲ (၄)လကျော်လောက်ရှိနေပြီ..တွေ့မယ့်တွေ့အဖွားကြီးအလောင်းကိုတွေ့ရမှာ..အခုတော့ ဒီကောင်မလေးအလောင်းကိုတွေ့နေရတော့စဉ်းစားစရာတွေကလဲ တပုံကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့။
ရန်မင်း။ ။ ကျွန်တော့ကို (၂)ခုကူညီပါ..တစ်ခုက အဖွားကြီး ဆေးရုံမတက်ခင်တစ်လလောက်က ဆေးရုံမှာ အသစ်ခန့်ထားတဲ့ ၀န်ထမ်းစာရင်းနဲ့ ဆေးရုံတက်ပြီးမှအခုအချိန်အထိ ခန့်ထားတဲ့ ၀န်ထမ်းစာရင်းလိုချင်တယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် အဲဒီဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းတွေ
လိုချင်တာဗျ။ သေချာတာကတော့ တရားခံဟာ မိန်းခလေးဖြစ်ပြီးတော့ အရပ်ကလဲ (၅)ပေ (၇)လက်မလောက်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ အဖွားကြီး အိမ်လိပ်စာရယ်၊ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းလေးတွေရယ်ကို သိချင်တယ်။ အဲဒါဆိုရင်ရပြီ..ကိုသြဘာရေ ခင်ဗျားကတော့ စာရေးဆရာအလုပ်ကို လုပ်ဗျာ ကျွန်တော့် သူနာပြုဆရာမလေးကို မေးစရာလေးတွေရှိတယ် ခင်ဗျားစာအုပ်ထဲမှာ လိုက်မှတ် ပေးပါလားဗျာ ခင်ဗျားက လက်ရေးတိုတတ်တယ်ဆိုတော့..
ကျွန်ုပ်။ ။ ဗျာ..ကိုရန်မင်း..ခင်ဗျား ဘယ်လိုလုပ် ကျွန်တော်လက်ရေးတိုတတ်တာကို သိတုန်းဗျ။
ရန်မင်း။ ။ မဟုတ်ပါဘူး..ကိုသြဘာရယ်။ လူတစ်ယောက်၊ အမှုတစ်ခုကို ဒီအတိုင်း အပေါ်ယံကြည့် တတ်တာမဟုတ်ပဲ သေချာကြည့်တတ်တဲ့ ကျွန်တော့ရဲ့အကျင့်ကြောင့်ပါ။ ကိုသြဘာရေ ကျွန်တော်တို့လဲ ဗိုက်ဆာလှပြီ..မြေနီကုန်ဘက်ရောက်တုန်း ဦးပြောင်ဆိုင်မှာ ထမင်းလေး ဘာလေးဝင်စားရအောင် ခင်ဗျားသဘောတူတယ်မှတ်လား။
ကျွန်ုပ်။ ။ စားတာပဲဗျာ..လူနဲ့တည့်ပါတယ်
မြေနီကုန်းဦးပြောင်ဆိုင်မှာ ထမင်းစားပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ရာ သုဝဏ္ဏသို့ပြန်ရောက်ရှိခိုက် ကိုရန်မင်း စုံစမ်းခိုင်းထားသောအရာများကို ကမာရွတ်ရဲစခန်းမှ လာရောက်ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။ ကိုရန်မင်းသည် အိမ်အပြင်သို့ပြင် မထွက်တမ်း ထိုအမှုတွဲများကို လေ့လာလျှက်ရှိရာ ကျွန်ုပ်လဲ အနှောက်အယှက်တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်မည်စိုးရမ်သဖြင့် ကိုရန်မင်းအနားသို့ သွားရောက်ခြင်းမရှိခဲ့သည်မှာ (၂)ရက်ခန့်ရှိပြီဖြစ်သည်။
သို့သော် (၃)ရက်မြောက်နေ့ နံနက်စောစောတွင် ကိုရန်မင်းသည် ကျွန်ုပ်အား လာရောက်ပြီး နိုးပါတော့သည်
ရန်မင်း။ ။ ထဗျို့..ကိုသြဘာရေ။ တရားခံကို သွားဖမ်းကြစို့..တော်ကြာ မမီပဲနေဦးမယ်။
ကျွန်ုပ်။ ။ အွန်..ခင်ဗျားကလဲဗျာ.. အိမ်ထဲအိမ်ပြင်မထွက်ပဲများ တရားခံဖမ်းဦးမှာလား။
ရန်မင်း။ ။ မယုံဘူးမဟုတ်လား..လိုက်ကြည့်ဗျာ..မျက်နှာအမြန်ဆုံးသစ်ပြီးသာလဲခဲ့ ကျွန်တော်
ကျွန်တော်လဲ မငြင်းသာတော့ပဲ အမြန်ဆုံးနည်းနှင့် မျက်နှာသစ်ခြင်းအမှုကို အပြီးသတ်ကာ ကိုရန်မင်းနောက်သို့ လိုက်ပါခဲ့ပါသည်။
ကိုရန်မင်းသည် တစ်လမ်းလုံးစကားတစ်လုံးမှမပြောပဲ ကားကိုသာ ဂရုတစိုက်အရှိန်ပြင်းပြင်ဖြင့် လှိုင်သာယာဘက်သို့ ဦးတည်မောင်းနှင်နေပြီး စက်မှုဇုံများကို အတန်ငယ်ကျော်ကာ ဒလဘက်သို့ ချိုးကွေပြီး ပန်းဆိုးတန်း ဒလ သဘောဆိပ် ဘက်သို့ဦးတည်မောင်းနှင်ပါတော့သည်။ ဒလဘက်မှာ ဖျာပုံဘက်သို့သွားသော Taxi များ နေရာသို့ ရောက်သောအခါ ကိုရန်မင်းသည် ကားပေါ်တွင်ထိုင်နေသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား..
ရန်မင်း။ ။ ကဲ..မစောသန္တာ ကျွန်တော်..ခင်ဗျားကို လူသတ်မှုနဲ့ ဖမ်းပါရစေ..ရဲစခန်းကို အမြန်ဆုံးလိုက်ခဲ့ပါ။
အမျိုးသမီး။ ။ ကျွန်မဆိုတာ ဘယ်လိုသိသလဲ ကိုရန်မင်း။ မဟာမြိုင်ကို ရှင်ခြေချကတည်းက အဖမ်းခံရမယ် ဆိုတာသိပြီးသားပါ..ဒါပေမယ့် စုံထောက်ရန်မင်းကို (၃)ရက်အထိ အန်တုနိုင်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ ဂုဏ်ယူလိုက်တော့မယ်။
ရန်မင်း။ ။ ယူပါဗျာ..ကျွန်တော်ခင်ဗျားကို တော်တော်စဉ်းစားပြီးမှ အဖြေတွေ့သွားတာပါ။ ခင်ဗျားတော်ပါတယ်။
ထိုအချိန်တွင် ရန်ကုန်မှအကြောင်းကြားချက်ဖြင့် မစောသန္တာအား ဖမ်းဆီးရန် ဒလရဲတပ်ဖွဲ့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များရောက်ရှိလာ ခဲ့ပါသည်။ လမ်းတွင် ကိုရန်မင်းကို ဘယ်လိုတရားခံမှန်း သိပုံကို မေးကြည့်သော အခါ….
စုံထောက်မင်း ဒီအတိုင်းဆက်သွားရင် ဖတ်သူသိပ်စိတ်ဝင်စားမှု နည်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ခေတ်နဲ့အညီ မော်ဒန်အကြောင်းအရာလေးတွေ ပါထည့်မှပေါ့။ နိုက်ကလပ်ဇာတ်လမ်းတွေ၊ အနှိပ်ခန်းမှာဖြစ်တဲ့အမှုတွဲ၊ လူမှောင်ခိုကေ့စ်တွေအကြောင်း ရေးရင် သေချာပေါက် အားပေးကြမယ်ဗျို့။ စုံထောက်ကိလည်း မော်ဒယ်ဂဲလ်လေးတွေနဲ့တွဲပြီး ငွေဆောင်တို့ဘာတို့သွားခိုင်း၊ သူတို့နဲ့အတူ နယ်ခရီးထွက်ခိုင်းပေါ့ဗျာ။ ကြောင်ကြီးတို့ ဆွေလှိုင်ဦးတို့ ဇော်ဇော်အောင်တို့ ဝတ္ထုဆိုသိပ်ကြိုက်။ ငယ်ငယ်ကတော့ မြဝဇီရေးတဲ့ ဘီကီနီဝတ်စုံနဲ့ကောင်မလေးပုံ မျက်နှာဖုံးပါတဲ့ စုံထောက်စာအုပ်ဟောင်း အိမ်မှာတွေ့လို့ အပြန်ပြန်အလှန်လှန် ဖတ်နေတာ နောက်ဆုံးမိဘတွေက စာအုပ်ဖျောက်ပစ်လိုက်ရတဲ့အထိ အားပေးဖူးတယ်။
စာရေးဆရာက လက်ရေးတိုရေးတတ်တာ ဘယ်လိုသိသွားတာလဲပါ ထည့်ရေးပေးပါ (သိချင်လို့)
ဆက်လက် အားပေးနေပါတယ်…. တတိယပိုင်း အမြန်ဆက်ပါဦး
အာ ဆတ်တငံ့ငံ့နဲ့ … ဘယ်မှာလဲ အပိုင်းသုံး … တင်မလား မတင်ဘူးလား … ပြောမြန်မြန်ပြော …။
မတင်ရင်လည်း ရတယ်နော် … မဖတ်ဖူးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး